Waa Casharkii Sadexaad Iyo Qisadi Nabi Nuux Oo Aad Ka Heli-doonto Raaxo Iyo Nafis Badan
June 21, 2015 | Posted by admin
Nuux Bin Lamak wuxuu nasab ahaan ka soo jeeda silsilada Nabi idriis .. Nuux waxuu dhashay boqol iyo labaatan iyo lix sano (126) kadib dhimashadi Aadam.
Allw weyne wuxuu ku xusay qisadiisa iyo qisada qoonkiisa iyo sidu ugu diray ciqaabkiisa kuwi diiday baaqiisi, wuxuu sido kale xusay sida uu u bad-baadiyey isaga iyo kuwi la saarnaa doontiisa
Nuux wax badan ayu u digay qoonkiisa oo ku yiri: Qoonkaygiiyow waxaan ahay rasuul ka socda Rabiga uumanka ee Caabuda Alle, ma lihidin ilaah kale isaga maahee, waxaan idin kaga baqaya cadaabta maalinta weyn. Laakiin Duqeydi ka mid ahayd qoonkiisi waase beeniyeen oo waxay ku yiraahdeen: Nuuxow waa ku arg-naayoo waxaad ku jirtaa baadi cad. waxay kalo ku yiraahdeen: Nuuxow waa nala dooday oo aad u badisay doodiini, haatan noo keen waxa aad nagu handadeyso, haddi aad run sheegeyso.
Alle weyne ayaa u wax-yooday Nuux: Cidna qoon-kaaga kama rumeyn-doonto aan ka ahayn wixi horay u rumeeyey ee amarkeyga waxyiga ku sameh Doon, hana igala hadlin arinka kuwa falay dulmiga waa kuwa aan hafin-doono. .. laakiin Nuux ma garan si u farsameeyo doontaas lagu amray, hasa ahaate malak Jibril C.S ayaa u yimid oo u nakhshadeeyey qaabka iyo suurada doonta isago u ekeysiiyey Suurada Digaaga .. Doonta waxaa loo sameeyey sadex Dabaq oo hal dabaq gaar ahaan kan hoose waxaa loo qoondeeyey xoolaha dugaaga iyo wixi la hal maala. dabaqa dhexena waxaa loogu tala galay Cuntada iyo Biyaha iyadoo kan ugu sreeya loo qoondeeyey Nuux iyo dadkiisa .. doonta waxaa la saaray Santuukhi u ku jiray maydkii Nabi Aadam Caleeyhi Salam oo waxaa saaray malaaiig alle u xil saaray.
Markii Nuux u sameynaayey Doonta illa mudo sadex sano socotay, mar kasta ayey duqeydi qoonkiisa soo ag maraan oo shaqaalaha farsama-yaqaanka ka gawraci jireen, waxayna ka dhigteen jees-jees .. isna waa Nuuxe waxuu ku oran-jiray: haddi aad nagu jees-jeestaan inaguna waa idinku jees-jeesi-doonaa, waana ogaan-doontaan waa kee kan ay korkiisa ku imaan-doonto cadaab dulinimo korkiisa dabooli-doonta.
« Muqdisho: Weerar lagu Qaaday Xarun Ciidan
Wararkii ugu dambeeyay weerarka saaka Muqdisho ka dhacay »